Ithegi: izimvo zomsebenzisi | Martech Zone
Ithegi: izimvo zomsebenzisi
Abantu kwi-UserVoice bebexakekile besakha kwaye bevavanya izixhobo ezitsha zokukunceda ukuba ubandakanye abasebenzisi bakho, ukuba ngcono, ingxelo eqhutywa yidatha, kunye nokubonelela ngenkxaso engcono kunangaphambili. Kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo bebevavanya ezinye zezixhobo ngaphakathi koncedo lwabasebenzisi be-UserVoice, kubandakanya ukoneliseka kunye newijethi zeSmartVote, kunye nefom entsha, elula. Namhlanje, benza ukuba ezi zixhobo zintsha zifumaneke kuwo wonke umntu! Dibana entsha,
Ukucima kunye nokuqaphela ukuba ezinye iingcali zosasazo lwentlalo ezixelela iinkampani ukuba ayinamsebenzi ukuba bathatha inxaxheba phi kumajelo asekuhlaleni, kuphela koko benzayo. Abanye bathi ukukhula kwesicwangciso seendaba zentlalo ngaphambi kokuba siqale. Kukho imibuzo emihlanu ekufuneka uzibuze yona xa usenza umxholo kwiwebhu: Umxholo kufuneka ubekwe phi? -Iqonga obeka kulo umxholo kufuneka lenzelwe abaphulaphuli ekujoliswe kuwe